Liisas erayo iyo turjumid qoraal ah | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Baro iswiidhish / Liisas erayo iyo turjumid qoraal ah
Halkan waxaad ka heli kartaa app-yaal kala duwan iyo bogag intarneet ah si aad qoraal ahaan u turjuntid erayo iyo qoraal.
Turjun erayo adigoo kaashanaya Lexin
Lexin waa qaamuus aad ka fiirin kartid erayo, oo aad ka heli kartid turjumid qoraal ah oo luqado kala duwan ah, taleefan gacmeed iyo kumbuyuutar labadaba. Tan kumbuyuutarka waxaad xitaa heli kartaa sawirro la turjumay, waxyaabo dhaq-dhaqaaqa iyo wada sheekeysi.
Turjumaha Google-ka waxaad ku qori kartaa erayo ama jumlado markaasna waxaad heli kartaa iyagoo turjuman. Haddii aad taleefan gacan isticmaaleysid hadal yar ayaad xitaa ku duubi kartaa ama waad sawiri kartaa qoraal, waxaadna heleysaa taas oo turjuman.
Liisas erayo ah oo xaalado kala duwan la xiriira
Liiska erayada ee Xafiiska xiriirka shaqada
Iswiidhish-Carabi Iswiidhish-Daari Iswiidhish-Ingiriisi Iswiidhish-Faransiis Iswiidhish-Faarsii Iswiidhish-Af ruush Iswiidhish-Af soomaali Iswiidhish-Isbaanish Iswiidhish-Tigrinya
​Erayo swiidhish ah
Liis erayo oo la xiriira sharciyada Synonymord.se SAOL.se